म जेलमा बस्दा पढ्ने, पढाउने काम गर्थे ! - Sidha News
म जेलमा बस्दा पढ्ने, पढाउने काम गर्थे !
कोरोना कहरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेता बुद्धिबहादुर रायमाझीको आत्मकथा समेटिएको पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो ।
पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जेलका सारथि रायमाझीको थुप्रै गुणगान गाउनुभयो । उहाँले जेलमा यात्नपूर्व बसेर संघर्षको मैदानबाट नहटेको बताउनुभयो ।
‘म जेलमा बस्दा पढ्ने, पढाउने काम गर्थे । साथीहरुलाई पढ्न प्रेरित गर्थे । झापाका संघर्षका साथीहरुको संख्या ठूलो थियो । नख्खु जेल, भद्रगोल जेल, केन्द्रको जेलमा छ्याछ्यास्ती झापाका साथीहरु थिए । झापा आन्दोलनका साथीहरुलाई पढाउन खोज्दा पनि पढाउन सकिने अवस्था थिएन । बुर्जुवा शिक्षा लिनु हुँदैन भन्ने थियो ।
तर, वर्गीय साथीहरुमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना थियो र मैले पढ्न उत्साहित गरेको थिएँ । त्यसपछि साथीहरु दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो । त्यहीँबाट एस.एल.सी. सँगै स्नातकोत्तरसमेत गर्नुभयो । बुद्धिबहादुर रायमाझीले अंग्रेजीमा राम्रो गर्नुभयो । बेदुरामजीले पिएचडी नै गर्नुभयो । प्रभावकिशोर पौडेलजीको अंग्रेजी खुबै राम्रो भयो ।
त्यसपछि बुद्धिबहादुर रायमाझी पर्नुहुन्छ । यसरी जेलमा बस्दा थुप्रै पुस्तक पढ्नुभयो । साहित्यका विविध क्षेत्रमा पनि । पढेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जाग्यो । जेलबाट बाहिरिएपछि प्रभावकिशोर र बुद्धिबहादुर रायमाझी अंग्रेजीकै शिक्षक बन्नुभयो । उहाँहरुसँग थुप्रै बिताएका पलहरु छन् । निष्क्रिय बस्न नचाहने मैले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्थे ।
यार्चागुम्बा भेट्न सजिलो होला तर, दालमा गेडा भेट्न सकिँदैनथ्यो । तरकारीमा घाँटी, कम्मर, पिडौँला जति पानी हाल्ने गरिन्थ्यो । तर, हामी भविष्यमा सुनौला दिन खोज्ने आशामा बितायौँ । जेल जीवनपछि निस्किएर उहाँले त्यो समयलाई खेर फाल्नुभएन । विद्धान जवानी अवस्थामा ग्यानको एउटा ठूलो भण्डार बोकेर निस्कनुभयो ।’